Ọ bụ otu n'ime ndị isi na ndị kasị nkịtị mere nke iduga data ike n'ezi na mkpokọta nke mkpebi mgbe ọ na-abịa ọmụma dajụlata. E nwere ọtụtụ iri puku tech na-abụghị tech ihe na-eduga onye ọrụ kwupụta izo ya ezo na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-kwuru na mmadụ kwesịrị ịmata mkpa tupu data na-ezoro ezo. Ọ na-na--ahụ kwuru na USB draịva na mpụga nchekwa ase bụ ụfọdụ n'ime ebe ndị ikwere data ike n'ezi na mgbe ndị a na ngwaọrụ na-eji mgbe ahụ, ọ dị mkpa iburu n'obi na izo ya ezo na-aghọ ihe dị mkpa na onye ọrụ na nke a ga jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe nzọụkwụ na-e iji hụ na data a nọ enem. N'okpuru bụ ụfọdụ nke mkpa ruru ka nke izo ya ezo na-mere:
1. Data nche
Ọ bụ-ahụ kwuru na izo ya ezo na-eme na a ụzọ na ọ bụ nanị otu obere ìgwè maara ihe dị n'ime data na maka otu ihe ahụ ọ na-nwetara na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na data nche metụtara okwu ndị onye na-eduga nnukwu losses n'ụwa nile.
2. Data ike n'ezi
The ọmụma na-etinye n'ime data ẹnịm na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-kwuru na ọ dịghị òkè n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ichebe nke iguzosi ike n'ezi ihe na-chọrọ site ndị mmadụ na òtù na ya mere echiche nke izo ya ezo na ya nke ọma.
Olee otú encrypt flash mbanye iji BitLocker?
BitLocker bụ ihe kasị mma na free windows ngwá ọrụ nke na-eme n'aka na nke kacha mma e nyere ka onye ọrụ mgbe ọ na-abịa data izo ya ezo. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na-eji ngwá ọrụ a abụghị mfe na niile ihe maka otu ihe ahụ naanị tech savvy ọrụ kwesịrị ji ya iji jide n'aka na-arụpụta na-enwetara na akara na chọrọ. Na-esonụ bụ usoro na e chepụta ma ọ bụ otú ahụ dị mfe na a novice onye ọrụ nwere ike na-eme otú needful enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
1. The ụzọ ga-esochi onye ọrụ bụ Control Panel> System na nche> BitLocker Drive izo ya ezo:
2. The ndepụta nke ngwaọrụ a ga-gosiri na onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na mbanye a ga-ezoro ezo nwere BitLocker tụgharịa on:
3. The mfe nhọrọ bụ mgbe ahụ ka ga-ahọrọ ie paswọọdụ Kpọghe dị ka ọ ga-eme ka n'aka na data anọgide nchebe:
4. The mgbake isi bụ mgbe ahụ na-eme na iji jide n'aka na ọ bụrụ na paswọọdụ na-efu mgbe ahụ, a isi a na-eji Ị kpọghee ekwt ngwaọrụ. Ọ bụ na-echekwara n'enweghị nsogbu na ntukwasi-obi:
5. The mmalite encrypting button bụ mgbe ahụ na-enwe na-amalite usoro:
6. The onye ọrụ kwesịrị ka ọnọdụ mmanya zuru ezu:
7. The mbanye izo ya ezo e dechara na zuru:
Ndị ọzọ ụzọ nke encrypting flash mbanye
E nwere ọtụtụ online ngwaọrụ nke na-n'aka na usoro-aghọ mma ma dị mfe maka onye ọrụ na onye ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ngwá ọrụ a nile nwekwara free ibudata na-eji. Nke akụkụ a nke nkuzi ga-eziokwu na nke ngwaọrụ onye ọrụ ga-eji jide n'aka na izo ya ezo usoro na dechara. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ihe kasị mma ngwaọrụ na-ahaziri dị ka kwa mkpa nke onye ọrụ e kọwara ebe a iji hụ na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Top atọ izo ya ezo ngwá ọrụ dị ka ndị a:
Rohos Obere Drive 1
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ndị kasị eji omume mgbe ọ na-abịa na izo ya ezo na n'elu ihe nile, ọ bụ free ibudata na-eji. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa ijide n'aka na na URL http://download.cnet.com/Rohos-Mini-Drive/3000-2092_4-10629845.html a gara na-needful mere na dị nnọọ mkpa ka Soro kpaliri na usoro ihe omume ga-arụnyere na PC ma ọ bụ usoro a na-eji enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ojiji nke usoro ihe omume dị nnọọ mfe ma kama nke zuru izo ya ezo ọ na-akwado ndị na-emezughị izo ya ezo nke na ngwaọrụ na a na-eji:
Ọ bụkwa otu n'ime omume nke jide n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na nke a. Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị iji usoro ihe omume n'okpuru otu ọkachamara na-elekọta ka n'ozuzu ojiji na-agụnye ụfọdụ tech nkọwa na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na-ezighị ezi ojiji nke usoro ihe omume pụrụ iduga egbu egbu results na pụkwara imebi ngwaike kpamkpam. All faịlụ usoro na-akwado site na omume na download njikọ bụ https://diskcryptor.net/wiki/Downloads ebe ihe omume e enịm maka download.
3. USB flash nche
Ọ bụ usoro ihe omume nke na-abụghị nanị free iji ma ọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi mgbe ọ na-abịa na izo ya ezo. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na omume na-abụghị nanị na-emeghe iyi ma ọ bụ 100% free iji na maka otu ihe ahụ ọ bụ ukwuu na ina mgbe ọ na-abịa ojiji na mkpokọta na-arụzi ụgbọala nnyefe. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na USB flash mbanye bụ usoro ihe omume nke e gosiri elu site ọrụ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị inye ya a ogbugba iji na-enweta nsonaazụ kacha mma:
Ọ dị mkpa encrypt a flash mbanye?
Ndị na-esonụ nghoputa e duziri iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na mmekọrita na-ajụ na ma ọ dị mkpa ka encrypt flash mbanye ma ọ bụ. Ihe kwesịrị ekwesị azịza ya bụ iji-họọrọ na nke a ga-esi a crystal doo anya:
ii. Ọ dịghị
> Resource> Flash Drive> Olee encrypt a flash mbanye iji hụ na safty gị data